Apple dia namoaka horonantsary ny Hermitage tamin'ny tifitra 5 ora mahery | Vaovao IPhone
Apple dia namoaka horonantsary iray momba ny Hermitage Museum tamin'ny tifitra tokana 5 ora sy 20 minitra
Fampisehoana vaovao an'ny iPhone 11 Pro mety. Ireo tovolahy avy any Cupertino dia tsy afaka nieritreritra zavatra hafa ankoatry ny fandehanana any amin'ny tranom-bakoka Rosiana Hermitage Museum ary handrakitra ny fitsidihana miaraka amin'ny iPhone tsara indrindra namboarina hatramin'izao. Hatreto dia toa hevitra tsara izany.
Ny zavatra mampihomehy dia tsy natao hanehoana ny fahaizan'ny fakantsary fakantsary amin'ny horonantsary ity horonantsary ity, fa te hampiseho ny fizakantenan'ilay fitaovana ihany koa izy ireo, handrakitra ny filaharana amin'ny tifitra tokana nefa tsy nijanona, nandritra 5 ora sy 20 minitra. Soa ihany fa misy famintinana ihany koa. Tokony ho tianao ny mandoko betsaka hahita azy amin'ny ankapobeny ...
Vao nampiditra horonantsary vaovao tamin'ny fanangonana "Shot on iPhone" i Apple. Mandritra izany dia mihazakazaka mandritra ny 5 ora sy 19 minitra ary 28 segondra izy Tranombakoky Hermesy an'ny Saint Petersburg. Voarakitra tao amin'ny 4K niaraka tamin'ny iPhone 11 Pro tamina tifitra tokana izany, tsy nijanona, ary tsy nisy bateria mpanampy, izay mbola nanana 19 isanjaton'ny fahaizany aorian'ny fandraisam-peo.
Soa ihany, raha te hanana hevitra momba ilay horonantsary ianao ary tsy dia tianao loatra ny sary hosodoko, dia namoaka koa i Apple tranofiara miaraka amin'ireo fanasongadinana, izay azonao jerena etsy ambany.
Ny firaketana dia mampiseho ny efitrano 45 ao amin'ny tranom-bakoka Rosiana Hermitage. Galerie goavambe izay anoloran'ilay video azy antsipirian'ny 588 amin'ny sangan'asany mpampianatra. Misy ihany koa ny filaharan'ny balaonina ary mifarana amin'ny fampisehoana nataon'i trio izay nitendry mozika nataon'i Kirill Richter. Lahatsary iray feno indrindra. Raha te-hahita azy manontolo ianao, dia asehonay anao eto ambany:
Ny Apple Video Collection "Voatifitra tamin'ny iPhone" dia mifantoka amin'ny fampisehoana ny hery rehetra atolotry ny fakan-tsary iPhone ho antsika, ary indrindra ny momba ny laharana farany farany iPhone 11 Pro.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Fantson'ny IPhone » iPhone 11 » Apple dia namoaka horonantsary iray momba ny Hermitage Museum tamin'ny tifitra tokana 5 ora sy 20 minitra
Lens for Watch no fampiharana voalohany manampy fividianana fampiharana